Ethiopia releases an unprecedented 8,875 prisoners as a goodwill New Year gesture - China.org.cn
The Ethiopian government announced on Tuesday it has released an unprecedented 8,875 prisoners as part of a goodwill Ethiopian New Year gesture.
The mass prisoner releases timed to coincide with the Ethiopian New Year 2011 are part of the Ethiopian government's call for unity and peace among the country's estimated 100 million population.
The Ethiopian 2011 comes as Ethiopia is seeming to come out of almost three years of political turmoil following the coming of Prime Minister Abiy Ahmed to the east African country's leadership. Ahmed assumed office in April.
Ahmed, in his New Year eve remarks to the Ethiopian people, also echoed the president's message, saying that "Ethiopia is a country we share, and we have to work for peaceful co-existence and prosperity."
​The Ethiopian government announced on Tuesday it has released an unprecedented 8,875 prisoners as part of a goodwill Ethiopian New Year gesture.